The 6th Day (2000) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Arnold Schwarzenegger, Colin Cunningham, Ken Pogue, Michael Rapaport, Michael Rooker, Rodney Rowland, Sarah Wynter, Terry Crews, Tony Goldwyn, Wendy Crewson
ဟောငျးပမေဲ့ ကောငျးနဆေဲ ခတျေမှီဆဲဆိုတာ ဒီလိုဇာတျကားမြိုးကို ဆိုလိုတယျထငျပါတယျ။ ငယျတုနျးက နားမလညျပဲကွညျ့ခဲ့ရတဲ့ အာနိုးဇာတျကားကောငျးလေးပါ။ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ သိပ်ပံပညာတှထှေနျးကားနပွေီး သသှေားတဲ့ တိရစ်ဆာနျတှကေို တရားဝငျပုံတူကူးပီးပသတျရှငျအောငျလုပျလို့ရတဲ့ နညျးပညာထှနျးကားနတေဲ့ခတျေမှာပါ။ လူကိုတော့ တရားဝငျ ပုံတူကူးခှငျ့မရှိသေးပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ လူတှကေို တရားမဝငျပုံတူကူးရာကနေ အာနိုးနှဈယောကျဖွဈသှားပီး ဇာတျကားတှေ ရူပျလာတဲ့ ဘယျလိုဖွရှေငျးကမြလဲ ? ပုံတူကူးခံရတဲ့သူကကော သူ့ကိုသူ လူအစဈထငျနမှောလား ? အာနိုးကကော ဘာကွောငျ့ ပုံတူကူးခံလိုကျရတာလဲ ? ဒီလိုစိတျဝငျစားစရာတှနေဲ့ ၂၀၀၀ ပွညျ့နှဈ သိပ်ပံဇာတျကားတှေ ဘယျလောကျကောငျးလဲဆိုတာ ကွညျ့ကွညျ့ပါအုံး
ဟောင်းပေမဲ့ ကောင်းနေဆဲ ခေတ်မှီဆဲဆိုတာ ဒီလိုဇာတ်ကားမျိုးကို ဆိုလိုတယ်ထင်ပါတယ်။ ငယ်တုန်းက နားမလည်ပဲကြည့်ခဲ့ရတဲ့ အာနိုးဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ သိပ္ပံပညာတွေထွန်းကားနေပြီး သေသွားတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကို တရားဝင်ပုံတူကူးပီးပသတ်ရှင်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းပညာထွန်းကားနေတဲ့ခေတ်မှာပါ။ လူကိုတော့ တရားဝင် ပုံတူကူးခွင့်မရှိသေးပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ လူတွေကို တရားမဝင်ပုံတူကူးရာကနေ အာနိုးနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားပီး ဇာတ်ကားတွေ ရူပ်လာတဲ့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းကျမလဲ ? ပုံတူကူးခံရတဲ့သူကကော သူ့ကိုသူ လူအစစ်ထင်နေမှာလား ? အာနိုးကကော ဘာကြောင့် ပုံတူကူးခံလိုက်ရတာလဲ ? ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာတွေနဲ့ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် သိပ္ပံဇာတ်ကားတွေ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာ ကြည့်ကြည့်ပါအုံး
Option2yuudrive.me 584 MB SD (480p)
Option3sharer.pw 584 MB SD (480p)
Option4usersdrive.com 584 MB SD (480p)
Option9storage.msubmovie.com 2.69 GB FHD (1080p) AC3 5.1
Option 10 yuudrive.me 2.69 GB FHD (1080p) AC3 5.1
Option 11 sharer.pw 2.69 GB FHD (1080p) AC3 5.1
Option 12 usersdrive.com 2.69 GB FHD (1080p) AC3 5.1